China insimbi engagqwali ezinamacala Ibha Ukwakha futhi Factory | I-Huaxiao
Ibha yeheksagoni ingxenye yensimbi engagqwali ende ende enamacala ayisithupha, ngenxa yezici zensimbi engagqwali iheksagoni ibha isetshenziswa kakhulu olwandle, amakhemikhali, ukwakhiwa nezinye izici.
Sino Engagqwali umthamo mayelana insimbi engagqwali Ibha ezinamacala
Usayizi : 3mm-200mm, 1/8 ″ kuye ku-8 ″
Incazelo ejwayelekile Amazinga ngebha yensimbi engagqwali
Ngokuya ngamazinga wokugoqa ibha yensimbi engagqwali, i-US, i-UK, iJalimane, iFrance, iRussia, iJapan kanye namazinga aphesheya athuthuke kakhulu, futhi i-US standard size tolerance iyona elawula kakhulu. Izindinganiso zakamuva zamaphrofayli asezinsimbi angenazinsimbi kazwelonke ashubile yilezi: I-ASTMA276 “Ukucaciswa Okujwayelekile Kwensimbi Engagqwali Namabha Wensimbi Amelana Nesishisa”; I-American ASTM 484 / A484M "Izidingo Ezijwayelekile Zensimbi Engagqwali kanye Nemigoqo Yensimbi Emelana Nokushisa, Ama-Billets Nokukhohlwa"; I-DIN17440 yaseJalimane "Izimo Zobuchwepheshe Zokulethwa Kweshidi Lensimbi Engagqwali, Umugqa Oshisayo Ogoqiwe, Intambo, Ucingo Oludonselwe, Ibha Yensimbi, UKWAKHA ne-Billet"; I-Japan JlS64304 "Induku Engagqwali". Ngasekuqaleni kweminyaka yama-1980, iChina yahlanganisa amazinga e-United States, Japan, Germany, ne-Soviet Union kanye ne-International Organisation for Standardization (i-ISO), yagxila emazingeni e-Japan JIS steel stainless steel rod, futhi yakha i-standard standard i-GB1220- 92 ngemigoqo yensimbi engagqwali, ngokubhekisa emazweni angaphandle. Amazinga, i-standard ejwayelekile kazwelonke ye-GB4356-84 yezinduku zensimbi engagqwali yenziwe, okwenza uchungechunge lwensimbi luphelele kakhulu, futhi isebenzisa izinhlobo ezisetshenziswa emhlabeni jikelele njenge-United States neJapan. Amanye amamaki wensimbi engagqwali eChina ahambisana namamaki ajwayelekile aseMelika, njengoba kukhonjisiwe kuThebula 1. Ngasikhathi sinye, igcina amamaki asetshenziswa kakhulu eChina, okuhambisana ngokuyisisekelo namamaki wensimbi engagqwali amazwe athuthukile njenge-United States, futhi inokuguquguquka okukhulu. Uma kuqhathaniswa namazwe athuthukile, igebe phakathi kwamazinga ngokwawo lehle kakhulu, kepha ikhwalithi ephezulu nokubekezelelana kobukhulu akukuhle, futhi umehluko ezingeni lomzimba mkhulu.
Inqubo Yokukhiqiza Ibha engagqwali
Inqubo yokukhiqizwa kwebha: ukwamukelwa kwe-billet → Ukushisa → ukugoqa → ukucheba kabili → ukupholisa → ukucheba → ukuhlolwa → ukupakisha → amamitha → isitoreji.
Amabha amancane akhiqizwa izigayo ezincane. Izinhlobo eziyinhloko zezigayo ezincane yilezi: okuqhubekayo, okuqhubekayo okuqhubekayo nokuvundlile. Njengamanje, iningi lezigayo ezintsha eziqhubekayo ezisetshenziswayo ezisetshenziswayo. Izigayo zanamuhla ze-rebar ezidumile zinesigayo se-rebar esiguqukayo esinejubane jikelele kanye nesigayo se-rebar esigcwele esinezingxenye ezine. I-billet esetshenziswe emgodini wokugaya omncane oqhubekayo imvamisa i-billet eqhubekayo, futhi ubude bayo ohlangothini ngokuvamile buyi-130-160 mm, 180 mm × 180 mm, ubude ngokuvamile bungamamitha ayi-6-12, kanti isisindo se-billet ngu-1.5 ~ 3 amathani. Imigqa yokugingqika ihlelwe kakhulu ngendlela eqonde mpo, ifinyelela umugqa ogcwele wokugoqa okungaholi. Inani lamaraki linqunywa ngomgomo wokugoqa i-rack eyodwa ndawonye. Izigayo ezigingqikayo ikakhulukazi ukudlula okunezinombolo. Kukhona izigayo ezincane eziyi-18, 20, 22 noma ngisho ezingama-24 zamasayizi ahlukene angenalutho nosayizi ophelile, kanti eziyi-18 yizona ezihamba phambili. Ukulungiswa kwejubane, ukungezwani okuncane nokugingqeleka okungenazimpikiswano yizici ezihlukanisayo zezigayo ezincane zesimanje eziqhubekayo. Ingxenye yohlaka lokugingqika nolumaphakathi olulawulwayo lilawulwa ukungezwani okuncane. Ingxenye yokugingqika okuphakathi nendawo yokugaya ayinazimpi ukuqinisekisa ukunemba kobukhulu bomkhiqizo. Izigayo eziqhubekayo ngokuvamile zinama-loopers ayisithupha kuya kwangu-10, futhi kuze kube yi-12 loopers.
Ukugoqwa kwebha kulula ukusebenzisa kukho konke okusetshenzisiwe futhi kungenziwa ngezindlela ezahlukahlukene. Kusuka kuma-roller amathathu kuya kokuphambuka, kusuka kokuqhubekayo kuya kokuqhubekayo, imigoqo ingakhiqizwa, kepha isivuno sabo, ukunemba kobukhulu, umkhiqizo ophelile, nezinga lokuphasa lihluke kakhulu. Ukuqina kwesigayo semigqa emithathu kuphansi, futhi ukwehla kwamandla okushisa okushisa kuzoholela ekushintshashintsheni okukhulu kosayizi womkhiqizo. Ngaphezu kwalokho, isivinini esisheshayo sesifundo nesikhathi sokugingqika eside kuholela ekwandeni kokwehluka kwezinga lokushisa phakathi kwekhanda nomsila wesitoko esigingqikayo, ubukhulu abuhambisani, futhi ukusebenza akulingani. Okukhiphayo kuphansi kakhulu, ikhwalithi iyaguquguquka kakhulu, futhi izinga lekhwalithi liphansi kakhulu. Izigayo ezigingqikayo ezigcwele ngokuvamile zamukela isicaba futhi ziyashintshana, izingxenye ezigingqikayo azisontekile, izingozi zincane, okukhiphayo kuphezulu, futhi ukukhiqizwa kobungcweti obukhulu nokulawulwa kokusebenza kungafezeka. Ngasikhathi sinye, umshini wokugaya usebenzisa ukuqina okuphezulu, idigri yokulawula iphezulu, nokunemba okuyisilinganiso kanye nezinga lokuphasa lithuthukiswe kakhulu, ikakhulukazi isilinganiso sesivuno sikhuphukile, futhi imfucuza yokwenziwa kwensimbi esithandweni sokubuyisa ibilokhu kuncishisiwe. Njengamanje, ukugoqa ibha kwenziwa kakhulu yisithando somlilo esishisayo, ukwehla okuphezulu kwengcindezi yamanzi, ukugoqa okushisa okuphansi, ukugingqa okungenakhanda nezinye izinqubo ezintsha. Ukugoqa okungahambi kahle nokugingqika okulingene kuyakhiwa ukuvumelanisa namabhilidi amakhulu futhi kuthuthukiswe ukunemba kokugoqa. Ukuqedela isigayo Ngokuyinhloko ukuthuthukisa ukunemba nejubane.
Uma kuqhathaniswa nokugoqa okushisayo okujwayelekile kwekhabhoni yensimbi, ubuchwepheshe bokugingqika kanye nenqubo yensimbi engagqwali kubonakala ikakhulu ekuhlolweni nasekuhlanzweni kwama-ingots, izindlela zokufudumeza, ukuklanywa kwemigodi, ukulawulwa kokushisa okugudlukayo kanye nokwelashwa kokushisa kwe-inthanethi kwemikhiqizo.
Langaphambilini Insimbi Engagqwali Yesiteshi Ibha
Olandelayo: 316L316 Cold asongwe Engagqwali amashidi (0.2mm-8mm)
Insimbi Engagqwali Enamacala Ayisithupha